ကြက်သွန်ဖြူမှကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လျှောက်လွှာ - Wisepowder
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူ Extract ဆိုတာဘာလဲ။
A အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူ၏ကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းမှဆင်းသက်လာသောကြက်သွန်ဖြူတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူထုတ်လုပ်ရန်ကြက်သွန်ဖြူအသစ်များကိုကုသမှုသည်အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၆၀ အထိမြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအခြေအနေများတွင်ပြုလုပ်သည်။°အကြမ်းအားဖြင့်ဆယ်ရက်အဘို့ကို C ။
ဤအခြေအနေများနှင့်အတူ, ကြက်သွန်ဖြူပိုမိုမြန်အသက်ကြီးခြင်းနှင့်အဖြူမှအနက်ရောင် / အနက်ရောင်အရောင်သို့လှည့်။ ၎င်းတွင်အရေးကြီးသောဗီတာမင်များနှင့်မန်းဂနိစ်၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင် B6၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ ဗီတာမင် B1၊ ဖော့စဖရပ်၊ ကြေးနီနှင့်ကယ်လစီယမ်များပါ ၀ င်သည်။
အချဉ်ဖောက်ထားသောအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူသည်ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်သာမကအခြားနိုင်ငံများမှနှစ်ပေါင်းရာချီသောလူကြိုက်များသောအစားအစာအရသာကိုမြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်ဖြစ်သည်။ အချိုပွဲများတွင်အသားရောစပ်ခြင်းအပါအ ၀ င်မတူညီသောအစားအစာများကိုအရသာထည့်ရန်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
အစားအစာ၏အရသာကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အခြားအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အရေပြားကျန်းမာရေးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကိုယ်ခံအားစနစ်တို့ပါဝင်သည်။ သငျသညျစိမ်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုန့်, ​​အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဘောလုံးသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဖျော်ရည်၏ပုံစံဝယ်နိုင်သည်။
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူ Extract လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုကရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် NO နှင့် LPS- သွေးဆောင် RAW264.7 ဆဲလ်များတွင်လိုလားသောရောင်ရမ်း cytokine ထုတ်လုပ်မှု။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ TNF-α-activated endometrial stromal ဆဲလ်များ၌ကြက်သွန်ဖြူ၏ hexane အစိတ်အပိုင်းဆဲလ်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ICAM-1 နှင့် VCAM-1 စကားရပ်။
၎င်းသည် Lukotrienes၊ ရောင်ရမ်းလိုလားသော cytokines များနှင့် LPS- သွေးဆောင် RAW2 ဆဲလ်များအတွင်းရှိ COX-5 နှင့် 264.7-lipooxygenase တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထပ်မံတားဆီးပါသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်တစ်ခုသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
၎င်းသည် oxidative လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအခါတွင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူတွင် phenr နှင့် flavonoids ပါရှိသည်။ ၎င်းနှစ်ခုလုံးသည် Nrf2 လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ကြက်သွန်ဖြူမှရရှိသောဒြပ်ပေါင်းများသည် HO-1, NQO1 နှင့် GST ကဲ့သို့သော antioxidant အင်ဇိုင်းများတွင် mRNA ၏ဖော်ပြမှုအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ tetrahydro-β-carboline အနကျအဓိပ်ပါယျပါဝငျသောဒြပ်ပေါင်းများ၊ N-fructosyl အချိုမှု၊ N-fructosyl arginine allixin နှင့် selenium, Nrf2 activation မှတဆင့်၎င်းကိုရရှိသည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုအားလတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူမှထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အချဉ်ဖောက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည်စိုထိုင်းဆမြင့်မားသင့်သည် (၈၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသောစိုထိုင်းဆနှင့်) နှင့် ၄၀ လောက်ပူသည် °60 ဖို့ကို C °Maillard တုံ့ပြန်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများကိုဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း C.
အချိန်နှင့်အမျှတစ်ချိန်ကအဖြူရောင်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်များသည်အနက်ရောင်အရောင်ဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကလည်းဖွံ့ဖြိုး ချိုသော tangy, ရည်, balsamic အရသာ, chewy texture နှင့်ထူးခြားသောအနံ့။
ကုသမှုကာလကြာချိန်သည်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး မှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်လေးရက်မှလေးရက်အထိကြာသည်။ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏ ဦး စားပေးမှုအပြင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သို့သော်လေ့လာမှုတစ်ခု၏တွေ့ရှိချက်များအရကြက်သွန်ဖြူကိုဆွေမျိုးစိုထိုင်းမှု ၉၀% နှင့် ၇၀ ၆၀ အပူချိန်တွင်ပြုလျှင် ၂၁ ရက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ °C. လေ့လာမှုအရ, ကုသမှု၏အခြေအနေများနှင့်ကြာချိန်သည်ထွက်ရှိလာသည့်ထုတ်ကုန်များ၏ဓာတ်တိုးနိုင်စွမ်းကိုမြင့်မားစေပြီးအများဆုံးအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။
1. Black ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူကူညီပေးသည်
ကြွက်တစ်ကောင်၏လေ့လာမှုအရကြက်သွန်ဖြူသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ အရွယ်အစားအဆီဆဲလ်နှင့်အစာအိမ်အဆီ. ဤသည်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူ၏ပြင်းထန်သောအရိပ်အယောင်ဖြစ်ခဲ့သည် ကိုယ်အလေးချိန် လူသားတို့တွင်အကျိုးကျေးဇူးများ။
2. Black Black ကြက်သွန်ဖြူသည်အရေပြားအတွက်အကျိုးရှိသည်
အရေပြားအတွက်ကြက်သွန်ဖြူနက်မှအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကြက်သွန်ဖြူ၌ S- allylcysteine ​​ဒြပ်ပေါင်းကိုရရှိခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်ကြက်သွန်ဖြူကိုအလွယ်တကူ metabolize ပြုလုပ်စေပြီးသင့်အရေပြားနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုရောဂါကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
အရေပြားအတွက်ကြက်သွန်ဖြူနက်မှအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာဝက်ခြံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပပျောက်ရေးတို့ဖြစ်သည်။ ဝက်ခြံသည်ဘက်တီးရီးယားအသားအရေဖြစ်ပြီးအပြစ်အနာအဆာများနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည် သင့်အရေပြားပေါ်ရှိဝက်ခြံကဲ့သို့သောဝက်ခြံများကဲ့သို့။ ဝက်ခြံများသည်သင့်ဆံပင် follicles များ၏အမျက်ဒေါသနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကြောင့် Allicin ကြောင့်ကြက်သွန်ဖြူအနက်ရောင်ထုတ်ယူမှုကဝက်ခြံဖြစ်စေသောဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဝက်ခြံနှင့်ဆက်စပ်သောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
3. Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract ခန္ဓာကိုယ်လက်စထရောတိုးတက်မှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရကြက်သွန်ဖြူသည်လက်စထရောအဆင့်ကိုမြင့်မားစွာရုန်းကန်နေရသောလူများတွင်ကိုလက်စထရောကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ်ယောက်၏ကောင်းသောကိုလက်စထရော - မြင့်မားသော - သိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာ lipoproteins (HDL) ကိုတိုးစေသည်။ အခြားလေ့လာမှုများအရ၎င်းသည်လက်စထရောလ်နှင့် triglicceride အဆိပ်ဓာတ်များကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုဆိုသည်။
4. Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract သွေးဖိအားတိုးတက်မှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူကို organosulfur ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်ထုပ်ထားသည်။ ဤအပန်းဖြေမှုသည်သွေးကိုပိုမိုချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေနိုင်သောကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချစေသည်။
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်သောလူနာ ၇၉ ယောက်ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရကြက်သွန်ဖြူအိတ်များကိုသောက်သောလူတို့တွင် ၁၁.၈ မီလီမီတာ၏သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းမှုကိုသုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုလူနာများကို ၁၂ ပတ်ကြာသောကြက်သွန်ဖြူဆေးရည်ကိုနေ့ရောညပါအမည်းရောင်ဆေးပြားနှစ်ချောင်းသို့မဟုတ်လေးခုကိုသောက်သုံးခဲ့ကြရသည်။
နှင့်အတူတင် antioxidants, ကြက်သွန်ဖြူနက်သည်ရောင်ရမ်းခြင်းသက်သာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် antioxidants များသည်ဆဲလ်အချက်ပြမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျစေသည်။ ထို့အပြင် antioxidants သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များအား၎င်းတို့အားပျက်စီးစေသော oxidative stress မှကာကွယ်ရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုပျက်ဆီးစေစေသောကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဆံပင်အတွက်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလူတို့အားသိရှိခဲ့သည် ရှေးခေတ်ကာလ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူကိုကျန်းမာသောဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်းလိုသူများကိုဆံပင်အတွက်အကျိုးရှိစေမည့်အလှကုန်စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆံပင်အသစ်၏ကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ ဆံပင်ကျဆင်းခြင်းကိုရပ်တန့်စေပြီးပုံမှန်အသုံးပြုသည့်အခါဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်
အမဲရောင်ကြက်သွန်ဖြူကဆံပင်အတွက်အကျိုးရှိစေတယ် ဗက်တီးရီးယားများ၊ မှိုများနှင့်ကပ်ပါးကောင်များကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ ဦး ရေပြား၌အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူဆီကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသက်ရှိများ၏သဘာဝတည်ဆောက်ပုံကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင့်ဆံပင်များနှင့် ဦး ရေပြားပိုမိုကျန်းမာလာသည်။
ထို့အပြင်ဆံပင်အတွက်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူအကျိုးကျေးဇူးများကိုမှစွပ်စွဲနေကြသည် ကြက်သွန်ဖြူ၏ရောင်ရမ်း anti- သက်ရောက်မှု။ သင့် ဦး ရေပြားပေါ်တွင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူဆံပင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချို့ကိစ္စများတွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းများကိုလျော့နည်းစေသည်။
7. Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract ကင်ဆာကြီးထွားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အတူကူညီပေးသည်
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောဂျပန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြွက်များ၏အကျိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ သုတေသီများက၎င်းသည်လူသားများတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုသံသယရှိသည်။ ဤရာထူးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်သဘောတူထားသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကအသက်အရွယ်ကြက်သွန်ဖြူစားသုံးမှုသည်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် vitro လေ့လာမှုအရအချဉ်ပေါက်သောအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုကအူမကြီးကင်ဆာကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည် ဆဲလ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ပင်ကင်ဆာဆဲလ်များကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်။
နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းသည်လူကြိုက်များသောအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်လ်တွင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူ၏နှလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူတစ် ဦး အတွက်သုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာကြက်သွန်ဖြူနှစ်မျိုးသည်နှလုံးပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရာတွင်တူညီသောထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
9. အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှု ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်
ထို့အပြင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူသည်သင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုစသည့်သိမြင်မှုအခြေအနေနှင့်ရုန်းကန်နေရသောအခါ။ ပါ ၀ င်သော antioxidants သည်အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သောရောင်ရမ်းခြင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင့် ဦး နှောက်၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာပြီးမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
အရသာပြောင်းလဲမှုကိုအဓိကအားဖြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကြက်သွန်ဖြူ၌ fructans (fructose နှင့် glucose) လျှော့ချခြင်းဖြင့်အဓိကပံ့ပိုးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်နောက်ကျောကြက်သွန်ဖြူသည်မပြုပြင်ထားသောကြက်သွန်ဖြူထက် fructan အဆင့်နိမ့်ကျသွားသည်။ fructans အဓိကအရသာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, သူတို့ရဲ့လျှော့ချပမာဏ, ထို့ကြောင့်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူလတ်ဆတ်သောတစ် ဦး ထက်လျော့နည်းအရသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှု၏အရသာသည်လတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူကဲ့သို့မခိုင်မာပါ။ ယခင်ချို tangy, ရည်နှင့် balsamic ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဆုံးစွန်သောရဲ့ပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးထိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူမှာ Allicin ပါဝင်မှုနည်းပါးလို့ပါ။ အိုမင်းရင့်ရော်စဉ်အတွင်းလတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူထဲရှိအချို့သောဓါတ်မတင့်များသည် diallyl sulfide, ajoene, diallyl disulfide, diallyl trisulfide နှင့် dithiins စသည့် antioxidant ဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
ရူပဗေဒဓာတုဗေဒပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူသည်ဇီဝသက်ရောက်မှုပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူတွင်ပါရှိသော S-allylcysteine ​​(SAC) သည်လတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအလုပ်လုပ်သည်။
အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုသည်အောက်ဆီဂျင်၊ ကယ်လိုရီ၊ ဖိုင်ဘာ၊ သံနှင့်သံများတွင်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကုန်ကြမ်းကြက်သွန်ဖြူသည်ပြုပြင်ထားသောကြက်သွန်ဖြူပုံစံထက်ဗီတာမင်စီ၊
အတိအကျပြောရလျှင်ကြက်သွန်ဖြူစားပွဲတင်ဇွန်းနှစ်ခုတွင် ၂၅ ကယ်လိုရီ၊ ၃ မီလီဂရမ်ဆိုဒီယမ်၊ ၅.၆ ဂရမ်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ၁ ဂရမ်ပရိုတိန်း၊ ၀.၁၁ ဂရမ်အဆီ၊ ၀.၄ ဂရမ်အစားအစာဖိုင်ဘာ၊ ၅.၂ မီလီဂရမ်ဗီတာမင်စီ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုပမာဏတူတူတွင်ကယ်လိုရီ ၄၀၊ ၄ ဂရမ် carbs၊ ၁ ဂပရိုတင်း၊ အဆီ ၂ ဂရမ်၊ 25g အစားအသောက်ဖိုင်ဘာ၊ ၁၆၀ မီလီဂရမ်ဆိုဒီယမ်၊ ၀.၆၄ မီလီဂရမ်သံ၊ ၂.၂ မီလီဂရမ်ဗီတာမင်စီနှင့်မီလီဂရမ် ၂၀ မီလီဂရမ်ပါဝင်သည်။
Black ကကြက်သွန်ဖြူ Extract ဆေးညွှန်း
သင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူသည့်ဘောလုံးများ၊ အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုသောက်သုံးမှုသို့မဟုတ် bentong ဂျင်းနှင့်အတူအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူလိုသည်ဖြစ်စေအကြံပြုထားသောဆေးကိုသင်လိုက်နာရန်အရေးကြီးသည်။ အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ကုန်သည်သဘာဝထုတ်ကုန်ဖြစ်သဖြင့်အလွန်အကျွံပမာဏများပါကဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဘို့ အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုန့် အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူဖျော်ရည်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူဖျော်ရည်ဖျော်ရည်ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်သင်၏အစာကိုထည့်ရန်အကြမ်းအားဖြင့်အသုံးပြုပါ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်အမှုန့် 1/3 Tsp ။ သင် bentong ဂျင်းနှင့်အတူအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့လိုတဲ့အခါဒီသောက်သုံးသောလည်းသက်ဆိုင်သည်. သို့မဟုတ်ပါကသင့်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
တစ်နေ့မှာဘယ်လောက်စားမယ်ဆိုတဲ့အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူကိုသိချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ တစ်နေ့လျှင်မည်သည့်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူမည်မျှစားရမည်ကိုအတိအကျဆုံးဖြတ်ရန်သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိပါ။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများနှင့်အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် တစ်နေ့လျှင် 5-10 အပိုင်းပိုင်း (လေးညှင်းပွင့်) ထိရောက်သောနှင့်လုံခြုံအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။
သင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူသောဘောလုံးသို့မဟုတ်ဆေးပြားကိုယူလိုပါကအများဆုံးအကြံပြုသည့်ဆေးမှာ 200mg ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုဖျော်ရည်ဖြစ်သော Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract Tonic Gold ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အကြံပြုထားသောဆေးသည်တစ်နေ့လျှင် 70ml ဖြစ်သည်။.
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ကုန်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့၏စားသုံးမှုနှင့်လိမ်းဆေးအသုံးချမှုအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ သို့သော်နှုတ်ဖြင့်ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်၊ ထို့ကြောင့်၊ သင်၌အစာအိမ်သို့မဟုတ်အစာခြေခြင်းပြhistoryနာရှိပါကထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုလုပ်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်အရင်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်ဟု GoldBee မှအာဟာရပညာရှင်များကပြောကြားသည်။
ထို့အပြင်ထုတ်ယူမှု၏ကြီးမားသောပါးစပ်ဆေးများသည်ကလေးများအတွက်မလုံခြုံပါ။ လိမ်းဆေးသည်ကလေး၏အရေပြားကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ခေါင်းလျှော်ရည်လိမ်းဆေးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားပြုမိသောအခါအရေပြားကိုယားယံစေသည်။
Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract လျှောက်လွှာ
အမျိုးမျိုးသောကြက်သွန်ဖြူများကဲ့သို့ပင်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုသည်အချက်အပြုတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရသာရှိသောဟင်းပွဲများတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ အစားအစာရဲ့အရသာကိုထုံလိုက်သည်။
၎င်း၏ antibacterial နှင့် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၎င်းထုတ်ကုန်ကိုအလှကုန်ပစ္စည်းများတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
လူမည်းကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူမှုကကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းထုတ်ယူမှုအားဖြည့်ဆေးများ အသုံးပြု၍ လူများအားရောဂါအမျိုးမျိုးမှဝေးဝေးနေရန်ကူညီသည်။
Black ကကြက်သွန်ဖြူ Extract ဖြည့်စွက်
Black ကကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဖြည့်စွက် အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်အမှုန့်, ​​အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဘောလုံးသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဖျော်ရည်အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၌လာကြ၏။ ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုမှာအနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူသည့်ဖျော်ရည်ဖြစ်သော Black Garlic Extract Tonic Gold ဟုခေါ်သည်။
အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ကုန်သည်အချဉ်ဖောက်ထားသောကြက်သွန်ဖြူထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ၏ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်, ​​အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဘောလုံးသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူဖျော်ရည်။ ဤထုတ်ယူမှု၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာတိုးတက်လာသောကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အသားအရေဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လေသံတိုးခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူမှုအားအချက်အပြုတ်အနုပညာနှင့်အလှကုန်လုပ်ငန်းအပါအ ၀ င်နေရာအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်။
Banerjee အက်စ်၊ Mukherjee PK၊ Maulik S. ကြက်သွန်ဖြူသည်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဆေးဖြစ်သည်။ ကောင်း၊ ဆိုး၊ ရုပ်ဆိုး။ Phytother ။ Res ။ 2003; 17: 97-106 ။
Ha AW, Ying T. , Kim WK ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ဆိုးကျိုးများ (Allium satvium) ကြွက်များတွင် lipid ဇီဝြဖစ်အပေါ်ထုတ်ယူတဲ့မြင့်မားတဲ့အဆီအစားအစာကျွေးမွေး၏။ အာဟာရ Res ။ လေ့ကျင့်။ 2015; 9: 30-36
ကန် O.-J. ကွဲပြားခြားနားသောအပူအပြောင်းအလဲနဲ့ခြေလှမ်းများအပြီး melanoidins ၏အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူကနေဖွဲ့စည်းအကဲဖြတ်။ Prev အာဟာရ အစားအစာသိပ္ပံ။ 2016; 21: 398
Kim DG၊ Kang MJ, Hong SS, Choi YH, Shin JH အသက်အရွယ်ကြီးသောကြက်သွန်ဖြူမှသီးခြားခွဲစိတ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုရှိသောဒြပ်ပေါင်းများ၏ရောင်ရမ်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Phytother ။ Res ။ 2017; 31: 53-61
Dietary Supplements ၏ Milner J. Encyclopedia Marcel Dekker; နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်၊ ယူအက်စ်၊Allium sativum) စစ။ 229-240 ။
၁။ အနက်ရောင်ကြက်သွန်ဖြူ Extract ဆိုတာဘာလဲ။
2.Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား
3. Black Black ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ယူထုတ်လုပ်မှု
9. Black Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract လျှောက်လွှာ
10.Black ကြက်သွန်ဖြူ Extract ဖြည့်စွက်